Oge ifufe nke afọ 2017, nke kachasị arụ ọrụ kemgbe ihe karịrị otu narị afọ | Netwọk Mgbasa Ozi
Oge ajọ ifufe nke 2017, nke kachasị arụ ọrụ kemgbe ihe karịrị otu narị afọ
Monica sanchez | | Ajọ Ifufe
Image - NOAA
N'ime afọ 2017 enwere ajọ ifufe nke mebiri nnukwu ihe, ọ bụghị naanị ihe onwunwe kamakwa ọnwụ mmadụ. Naanị Irma, klas 5, nke sitere na August 30 ruo September 15, hapụrụ $ 118 na ọnwụ 127. Ọ bụ nke kachasị ọnụ kemgbe Katrina, 2003. Mana anyị agaghị echeta Irma naanị: enwere aha ndị ọzọ agaghị adị mfe ichefu, dịka Harvey o María.
Ikpeazụ izu ụka anyị nwere Nate, nke si na oke mmiri ozuzo nke mebiri Costa Rica, Nicaragua na Honduras gaa na ajọ ifufe 1 nke na-eyi Mexico egwu na akụkụ nke United States n'ụsọ oké osimiri. Na ihe a, n'oge enwere 9 ajọ ifufe nke oge, nke kacha arụ ọrụ kemgbe ihe karịrị otu narị afọ.
Ọ bụ ezie na mgbe mbụ e si n’ala ma ọ bụ ụgbọ mmiri mee nchọpụta, nke na-eme ka o sie ike ịmata ma ọ bụrụ na ajọ ifufe iri malitere n’otu afọ, nke bụ eziokwu bụ oge 2017 na-arụsi ọrụ ike na Atlantic, kemgbe ọ dịkarịa ala 1893. Ma gịnị kpatara ya?
Ndị ọkachamara ebula ụzọ buru amụma na oge a ga-arụ ọrụ karịa nkịtị. The nkezi elu okpomọkụ nke Atlantic Ocean, tinyere a na-adịghị ike onu nke El Niñoekwela ka ọtụtụ ajọ ifufe fee, ụfọdụ n'ime ha kpụ ọkụ n'ọnụ.
Ajọ Ifufe Maria mebiri na Puerto Rico.
Foto - Carlos García / Reuters
Oké ifufe na-eri nri n’oké osimiri. Na elu okpomọkụ oké osimiri, a na-atụ anya na cyclones ọzọ ga-amalite. Ma, na mgbakwunye, ọ bụrụ na anyị anọgide na-eji oké osimiri dị ka ihe mkpofu ahihia, anyị agaghị etinye ndụ nke anụmanụ mmiri, tinyere ndụ anyị. Plastic bụ ihe na-ekpokọta okpomọkụ ma nwee ike ime ka okpomọkụ nke mmiri dịkwuo elu. Na-adịbeghị anya ịchọta nke agwaetiti plastik ọhụrụ dị na Pacific, nke hà ka Mexico ma buruo ibu karịa Spen, kwesịrị inyere anyị aka ime ihe iji malite ịkwanyere mbara ala anyị bi na ya ùgwù.
Ọ bụrụ na anyị emeghị, anyị ga-etinye aka na mmemme ihu igwe na-ebibiwanyewanye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Oge ajọ ifufe nke 2017, nke kachasị arụ ọrụ kemgbe ihe karịrị otu narị afọ
Las Tablas de Daimiel nwere oke ọkọchị
Ọkachamara kwuru na enwere mmekọrịta dị n’etiti ala ọma jijiji na ugwu mgbawa